192.168.8.1 - Avereno jerena ny fikirakira default
Mety maniry ianao Avereno ny làlanao amin'ny Fikirana Default raha tsy tadidinao ny tenimiafin'ny admin dia tsy afaka mahatadidy ny bokotra fiarovana ny tambajotra tsy misy tariby ianao na mamaha olana amin'ny fifandraisana.
Ny fomba etsy ambany dia tsy toy ny famerenana modem na router.
Teknika famerenana router hafa - Fihetsiketsehana mafy, malefaka, bisikileta
Fomba tsara indrindra hamerenana ireo mpamily
Fomba famerenana router isan-karazany maro azo ampiasaina miankina amin'ny toe-javatra. Matetika soso-kevitra ny famerenana mafy, famerenana malefaka ary bisikileta mandeha amin'ny herinaratra.
Ahoana ny famerenanao ny router Fikirana default
Ny famerenam-bidy mafy dia karazana famerenana amin'ny laoniny ny router ary matetika ampiasaina raha tsy nahatadidy ny lakile na ny teny miafina ny admin ary maniry ny hanomboka indray miaraka amina sehatra vaovao.
Ny famerenana amin'ny laoniny mafy dia tsy mamerina na manaisotra ilay kinova firmware-napetraka ankehitriny. Mba hisorohana ny fahasarotana amin'ny fifandraisana Internet, esory ny modem broadband amin'ny router alohan'ny hanaovana reset mafy.
Mba hamerenana mafy:
Ampifamadiho ny router, atodiho amin'ny lafiny izay manana ny Reset key. Ny famaha Reset dia eo amin'ny farany ambany na any aoriana.
Miaraka amin'ny somary minitra sy maranitra, toy ny paompy, nitazona ny lakilen'ny Reset nandritra ny telopolo segondra.
Afaho ny kitendry Reset & miandrasa mandritra ny telopolo segondra mba hamerenan'ny router ny router & hiverina indray.
Ny fomba mpisolo toerana dia ny torolàlana sarotra 30-30-30 izay mitarika fanosehana ny lakilen'ny Reset mandritra ny sivapolo seg fa tsy ny telopolo ary mety hozahana raha mandeha ny main30-secondstypedoes.
Mpamorona router maromaro no mety manana fomba mety hamerenana amin'ny laoniny ny router, ary ny teknika hafa hamerenana ny router mety hiovaova eo amin'ireo maodely.
Vonoina & ampitao ny herin'ny router dia fantatra amin'ny hoe bisikileta herinaratra. Natao hamerenana amin'ny laoniny ny olana izay mahatonga ny router mandatsaka fifandraisana ohatra manimba ny fahatsiarovan-tena ao anaty na ny hafanana. Ny tsingerin'ny herinaratra dia tsy manaisotra ny teny miafina voatahiry, ny fikirana hafa voatahiry na ny bokotra fiarovana, miaraka amin'ny dashboard an'ny router.
Hanodina ny router ny herinaratra:
Vonoy ny herin'ny router. Vonoina koa ny bokotra Power na esory ny plug-her.
Esory ny bateria amin'ireo mpandeha mandeha amin'ny bateria.
Olona maro no miandry ny telopolo segondra tsy fanazarana; na izany aza tsy ilaina ny miandry mihoatra ny segondra vitsivitsy manelanelana ny fanapahana sy ny fametahana ny plug-n'ny router. Saingy amin'ny famerenana amin'ny laoniny mafy, mba hanohizana ny asany ny router dia mitaky fotoana rehefa tafaverina ny heriny.
Mandritra ny famahana olana momba ny fifandraisana amin'ny Internet, dia mety hanampy ny famerenana ny rohy eo anelanelan'ny modem sy ny router. Ity dia mety hampiditra fotsiny ny fanesorana ny fifandraisana ara-batana eo afovoan'ny roa, tsy fifehezana ny rindrambaiko na ny fijanonan'ny herinaratra.
Raha ampitahaina amin'ny karazana famerenana indray dia misy vokany eo noho eo ny famerenana malefaka satria tsy mila ny router hanomboka indray izy ireo.
Raha hanao famerenana malefaka dia esory ny tariby izay mampifandray ny router amin'ny modem, avy eo mifangaro indray rehefa afaka kelikely. Vitsy ny router afaka manana fomba tsy mahazatra hanaovana famerenana malefaka:
Mitadiava lakile Disconnect / Connect amin'ny dashboard. Ity dia mamerina ny rohy eo amin'ireo mpanome tolotra sy ny modem.